Mgbasa mgbasa ozi na ịda mbà n'obi - Regwọ Ọrụ wardgwọ
Home Blog akụkọ Mgbasa mgbasa ozi na ịda mbà n'obi
adminaccount888 12th December 2020 Akụkọ kacha ọhụrụ
Enweela ọtụtụ okwu na afọ ndị na-adịbeghị anya banyere ma ojiji mgbasa ozi mmekọrịta (SMU) nwere njikọ na ịda mbà n'obi. Ihe omumu ohuru a na American Journal of Medicine Mgbochi na-egosi na o nwere ike ịbụ. Anyị na-eleba anya na mgbasa ozi mmekọrịta na nkuzi nkuzi anyị na Mmekọahụ, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ Brain. Anyị lere ịda mbà n'obi anya ọtụtụ Mmetụta Echiche nke Porn.
Ọmụmụ ihe ọhụrụ a lere anya ndị America 990 dị afọ 18-30 bụ ndị dara mbà na mbido ọmụmụ ahụ. Ọ nwalere ha mgbe ọnwa isii gachara. Baseline Social Media Jiri:
“Ejikọtara onwe ya na mmepe nke ịda mbà n'obi na ọnwa isii sochirinụ. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpakọrịta dị n'etiti ọnụnọ nke ịda mbà n'obi na ntọala na mmụba na SMU n'ime ọnwa 6 sochirinụ. ”
Njikọ na Ndagide
Akwụkwọ akụkọ ahụ gara n'ihu na-ekwu na:
“E nwere 3 isi echiche mere SMU nwere ike ịbụ metụtara mmepe nke ịda mbà n'obi. Otu bụ na SMU na-ewe ogologo oge. N'ihe nlere a, onye so na ya jiri ihe dị ka awa 3 nke mgbasa ozi mmekọrịta kwa ụbọchị, na-agbanwe agbanwe na atụmatụ mba. Ya mere, ọ nwere ike bụrụ na nnukwu oge a na - ewepụ ihe omume nwere ike ịbara onye ọ bụla uru, dịka ịmalite mmekọrịta dị mkpa karị na mmadụ, imezu ebumnuche ndị ziri ezi, ma ọ bụ ọbụlagodi inwe oge ịtụgharị uche bara uru.
“Ihe nke abụọ mere SMU nwere ike iji metụta mmepe nke ịda mbà n'obi metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Maka ndị na-eto eto, ndị nọ n'oge dị oke egwu gbasara mmepe nke njirimara, ikpughe ihe osise na-enweghị ike ịchọta na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịkwado echiche ịda mba.
Ihe nke ato kpatara ya bu na ikiri ndi mmadu ihe ngosi nke ndi mmadu nwere ike igbochi ya. Dịka ọmụmaatụ, ụzọ ụzọ ọdịnala metụtara mmepe mmekọrịta mmekọrịta, dị ka ịmara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịmara onwe onye, ​​na nhazi ụgwọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gụnyere ịmekọrịta mgbagwoju anya n'etiti ọtụtụ ụbụrụ ụbụrụ dị ka cortex dorsomedial prefrontal, medial prefrontal cortex, na ventral striatum.
“Ọ bụ ezie na nyocha na mpaghara a bụ nke mbido, ọ ga-ekwe omume na ihe ndị gbara ya gburugburu nke SMU, dị ka ịgba ọsọ ọsọ nke ụgwọ ọrụ a na usoro ọgụgụ isi, nwere ike igbochi mmepe nkịtị, nke nwekwara ike ịkwalite mmepe nke ọnọdụ dịka ịda mba. Ọ dị mkpa imekwu nnyocha n'akụkụ a iji chọpụta usoro ndị a pụrụ ịdị. ”
Ọmụmụ ihe a na-enye nnukwu data mbụ buru ibu na-enyocha nduzi nke SMU na ịda mbà n'obi. Ọ hụrụ mkpakọrịta siri ike n'etiti SMU mbụ na mmepe nke ịda mbà n'obi mana enweghị mmụba na SMU mgbe ịda mbà. Patternkpụrụ a na-egosi mkpakọrịta dị n'etiti SMU na ịda mbà n'obi, ụkpụrụ dị mkpa maka kpatara nsogbu. Nsonaazụ ndị a na-egosi na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrịa dara mbà kwesịrị ịghọta SMU dị ka ihe dị mkpa dị egwu na-apụta maka mmepe na enwere ike ịda mbà n'obi (mesiri ike).
Mpempe akwụkwọ zuru ezu nke Mkpakọrịta Temporal N'etiti Social Media Jiri na Mmetụta dị ugbu a na oghere oghere.